Fankalazana ny 26 jona eny Mahamasina : misy manakarama 4 000 Ar izay mijery matso | NewsMada
Fankalazana ny 26 jona eny Mahamasina : misy manakarama 4 000 Ar izay mijery matso
Hanao ahoana ny matso eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, rahampitso, izay anisan’ny ivon’ny fankalazana ny 26 jona? Misy manakarama 4 000 Ar izay mijery matso…
“Misy mamory olona eran’ny fokontany karamaina 4 000 Ar handeha hanatrika matso. Ny dikan’izay, efa tsy mahaleo tena intsony ny fitondrana amin’izao fotoana izao. Be dia be ny efa mitety fokontany sy manentana fa homena 4 000 Ar izay manatrika matso.”
Io no nambaran’ny filohan’ny Vondron’olona miaro ny zon’ny mpanjifa, Rasolofoson Ratsimbazafy Eugène, tao amin’ny haino aman-jery tsy miankina iray, omaly. “Tsy matoky tena intsony ny eo amin’ny fitondrana. Milaza izy fa manana olona, nefa tsy misy olona akory fa vidina ny olona mankany”, hoy izy.
Misy ny toerana manokana ho an’ny mpianatra
“Efa be dia be ny resaka mandeha eny an-tanàna eny. Mahagaga ny hoe: tsy azon’ny vahoaka rehetra idirana ao amin’ny kianjan’i Mahamasina, ny mpianatra avy any an-tsekoly no hoentina halefa ao… ” hoy ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Jean-Omer, andro vitsivitsy lasa izay.
Manoloana izany, nisy ny fanazavan’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, teny Mahamasina, ny 22 jona: 6 000 na 7 000 ny mpianatra, misy avy any amin’ny faritany hafa, no hanatrika ny matso eny Mahamasina, ny 26 jona. 25% amin’ny toerana izany. Ho afaka amin’izay ny ahiahy?
Toy ny tamin’ny taon-dasa ihany ny raharaha
Anahiana korontana sy fanonganam-panjakana toy ny tamin’ny taon-dasa ihany ny fankalazana ny 26 jona. Nambaran’ny lehibe’ny CIRGN, ny Jly Rakotomahanina Florens, ny 8 jona, ohatra, fa efa maro ny anarana sy ny faritra azo ny amin’izany. “Afa-milaza izahay ho an’izay rehetra mieritreritra hanao an’izay fa efa vonona tanteraka hiatrika izay hataon’izy ireo. Tsy maintsy tratra, raha sanatria misy izany”, hoy izy.
Tamin’ny taon-dasa, voalaza ny fisian’ny fivorivoriana etsy sy eroa mizarazara vola noho ny antony tsy fantatra. Ny fikorontanan’ireo tsy nahazo no hoe nahavaky betroka ny raharaha. Teo koa ny hoe fisian’ny olona voakarama hitsiotsioka amin’ny matso eny Mahamasina. Hanao ahoana amin’ity… ?
Tsy misy izay fiovana ny fametrahana fitoniana, fifanarahana andraikitra, fampihavanam-pirenena, fanarenam-pirenena… Ahiana lava ny fanakorontanana sy fanonganam-panjakana.
Lasa tsy mampiombona sy iombonana intsony ny fetim-pirenena amin’izao Repoblika IV izao: ao anaty fiahiahina, teritery, fisarahan-kevitra. Tsy amim-pifaliana intsony. Miseholany amin’ny fahalainana manangan-tsaina izany. Noho ny fahantram-bahoaka mihalalina? Na ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny mpitondra…